Nozarainay ny mombamomba ary fampahalalana demografika amin'ny tambajotra sosialy malaza tsirairay, saingy tsy manome fampahalalana betsaka momba ny fiovan'ny fitondran-tena sy ny fiantraikan'ny media sosialy izany. Finday, eCommerce, dokambarotra fampiratiana, fifandraisan'ny besinimaro ary koa ny marketing amin'ny motera fikarohana dia voan'ny marketing ara-tsosialy.
Ny tena izy dia… raha tsy varotra amin'ny media sosialy ny orinasanao dia very fotoana lehibe ianao. Raha ny tena izy, 33% ho an'ny mpivarotra nanondro ny media sosialy ho fantsom-barotra mahomby amin'ny vidiny avo lenta raha oharina amin'ny fampiratiana dokam-barotra sy ny fifandraisana amin'ny daholobe.
In JBHny sary farany an'i Smart Insights ary Similarweb izy ireo dia mizaha ny State of Social Media Marketing amin'ny taona 2015. Tsy nahagaga fa ny media sosialy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny ankamaroan'ny paikadin'ny varotra marika noho ny habetsaky ny tratra sy ny fifampiraharahana azo atao, fa inona ireo tambajotra sosialy malaza indrindra amin'izao fotoana izao ary ahoana ny marika manararaotra amin'ireny hanatsara ny fahombiazany?
Ny infographic dia mizara fanovana vitsivitsy amin'ny marketing media sosialy izay tokony ho fantatrao ihany:
Facebook - nanala ny fahafahan'ny orinasa mitaky vola amin'ny tiany ary nanisy fiovana eo amin'ny fahitana newsfeed.
Twitter - nanampy ny fahaizana mandefa horonantsary mivantana ary mirakitra izany Periscope. (Na dia mino aza aho Blab.im dia sehatra video sosialy matanjaka kokoa ho an'ny marketing).
Instagram - fampahafantarana carousel dokam-barotra izay misy sary maro, swiping raha mila fanazavana bebe kokoa, ary mampifandray mba hitarika fifamoivoizana.
Pinterest - nanampy bokotra pin azo amidy, mamadika ny sehatra ho sehatra ecommerce lehibe iray!
LinkedIn - nanampy ny Lead Accelerator ahafahana manao lasibatra sy mamadika mpampiasa manokana.
Tags: blab marketingblab.imblab.im marketingFacebook Marketingcarousel instagraminstagram marketingjbhmpanafaingana fitarihanamarketing marketingperiscopevarotra periskopbokotra pinterestMarketing amin'ny Pinterestsimilarwebfahitana maranitrahaino aman-jery sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialyhoronantsary sosialyMarketing amin'ny Twitter